Wasiirka Maliyadda Djibouti Wuxuu yiri “Somaliland, waxaanu wadaagnaa wax dekedda ka weyn. Waxaanu leenahay yool midaysan oo aanay ciddina dhaawici karin.” – Djiboutination
HomeNEWS2 Wasiirka Maliyadda Djibouti Wuxuu yiri “Somaliland, waxaanu wadaagnaa wax dekedda ka weyn. Waxaanu leenahay yool midaysan oo aanay ciddina dhaawici karin.” Wasiirka Maliyadda Djibouti Wuxuu yiri “Somaliland, waxaanu wadaagnaa wax dekedda ka weyn. Waxaanu leenahay yool midaysan oo aanay ciddina dhaawici karin.”
- May 30, 2016 - in NEWS2 674 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Wasiirka maaliyadda Djibouti oo habeen hore bartiisa twitterka su’aalo lagu weydiinayay, ayaa saxafi Cali Jibriil Xirsi oo ah suxufi reer Somaliland ahi wuxuu wasiirka weydiiyay in heshiiska dekedda Berbera uu khatar ku yahay dekedda iyo dalka Djibouti, waxaanu Wasiirka Djibouti ku jawaabay, “Maya habayaraate. Djbouti ahaan waxaanu rumaysanahay in Bebera ay dhammaystir u tahay Djibouti, waxaanu doonaynaa Somaliland oo horumarta.” ayuu yidhi Wasiirka oo intaas sii raaciyay “Somaliland, waxaanu wadaagnaa wax dekedda ka weyn. Waxaanu leenahay yool midaysan oo aanay ciddina dhaawici karin.”
Previous article Daawo: Gaas oo Xarunta Villa Hargeysa kula kulmay Masuuliyiin ka socotey MSF Next article Maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab ayaa lasoo sheegayaa in Odayaal dhaqmeed ay ku dileen deegaanka Kwala oo ka tirsan Kenya About the author djibouti